We She Me: ၂၀၁၀ အတွက် ဒိန်ချဉ် နောက်တစ်အိုး
လွတ်ငြိမ်းလေပြေ (breeze) - 12/31/09, 7:20 PM
စာကောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို
ကျွန်မတော့ ဒိန်ချဉ်ဖြစ်အောင်တောင် ကြိုးစားရပါဦးမယ်
Moe Cho Thinn - 12/31/09, 7:27 PM
ရေးလိုက်ရင်တော့ တွေးစရာလေးတွေ ပါတာချည်းပဲပေါ့။
ဒိန်ချဉ်ကောင်းကောင်းလေး တခွက် သောက်လိုက်ရသလို စိတ်ကို ကြည်သွားစေတာပေါ့။
ကျေးဇူးပါပဲ ကိုAndy။ ဒိထက် ပိုပြီး အရသာရှိတဲ့ စားဖွယ်တွေ ချက်ကျွေးမှာကို မျှော်လင့်လို့ နေပါတယ်။
Happy New Year ပါ ကိုAndy နဲ့ ချစ်စရာ မိသားစုလေးရေ..
Anonymous - 12/31/09, 9:24 PM
ဘယ်ပျောက်နေကြတာလဲဗျာ ။ အခု ပို့စ် အသစ်မြင်ရမှ ၀မ်းသာသွားတယ် ။ နှစ်သစ်မှာ ခွန်အားသစ်နဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းကို ဆက်လျှောက်နိုင်ကြဖို့ ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ် ။
Khaing - 12/31/09, 9:37 PM
Happy New Year to Ko Andy & Family!!!
wish you to be able to make good yogurt and many more varieties in 2010.
Thanks for this post too. It's worth it to wait for so long... :)
Looking forward to read more posts in 2010.
subuueain - 12/31/09, 9:59 PM
Thanks for this post. Happy New Year To You and Your Family!
Anonymous - 1/1/10, 1:26 AM
Happy New Year WESHEME family.
JuneOne - 1/1/10, 2:16 AM
ksanchaung - 1/1/10, 2:55 AM
Happy New Year!!! ပါ။ လူတယောက်အတွက် ကိုယ့်သမိုင်းကြောင်း (ကိုယ့် ပင်ကိုယ်စရိုက်) ကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်တာပဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှားမှန်းသိတောင်မှ ဘ၀သစ်စဖို့ အချိန်အတော်ယူရလိမ့်မယ်။
ကိုဇေယျာ - 1/1/10, 3:43 AM
မျှော်ရကြိုး နပ်တယ်ဗျာ ..
You make my day with that post bro.
pandora - 1/1/10, 3:50 AM
နှစ်သစ်တိုင်းမှာ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်တွေ တစ်တိုင်ပြီး တစ်တိုင် စိုက်နိုင်ပါစေ။
khin oo may - 1/1/10, 3:53 AM
khin oo may - 1/1/10, 3:54 AM
အဲသလိုပြောလို့ လုပ်ကြည့်ဘူးတယ်။ ဒီန်ချဥမဖြစ်ပါဘူး လွတ်ပစ်လိုက်ရတယ်။
khin oo may - 1/1/10, 3:55 AM
၂၀၁၀ မှာ တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကတော့ဘလော့လျော့လိုက်ဘို့ဘဲ အများကြီးပိုတိုးတက်သွာိးုနိုင်တယ် အားလုံးအလုံးစုံ
KHIN ZIN MINN - 1/1/10, 7:51 AM
ko andy and family
thanks for this post, who let me think that life is not easy to continue.But road is already have, try to continue , and think well how we would like to continue?????
for this 2010, let me share.....my best wishes
to your ennemy-forgiveness
sawphonelu - 1/1/10, 11:02 AM
Waiting long for your post . thanks and happy new year.
Andy Myint - 1/1/10, 11:14 AM
အားလုံးပဲ Happy New Year ပါ...
၂၀၁၀ မှာ ဒိန်ချဉ်၊ ဒိန်ခဲတွေ ဖြစ်ပါစေ မလေပြေ
မချိုသင်းပြောမှ ဒိန်ချဉ်တောင် သောက်ချင်သွားတယ်။ ထန်းလျက်နဲ့လည်း ကြိုက်တယ်။ ရေခဲနဲ့ဆို လှည်းကလေးနဲ့ ဒိန်ချဉ်သည်ကိုတောင် သတိရတယ်။
ပျောက်ဆို အလုပ်ရှုပ် စိတ်ရှုပ်နဲ့ ပျင်းတာလည်း ပါပါတယ် စာဖတ်သူ... ခွန်အားသစ်တွေ အခွင့်အလမ်း အသစ်တွေ ရပါစေ
Thanks, Ma Khaing.. To you as well... I'll try to post more
Thanks, subuuein.. Happy new year
Happy New Year... wish youahappy and prosperous for you growing family :)
နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါ ကိုKစမ်းချောင်း.. ဟုတ်ပါတယ် သမိုင်းကြောင်းကိုတော့ ဖျောက်ဖျက်ဖို့ မလွယ်ပါ.. ဖျောက်ဖျက်ရန် မသင့်ပါ
Happy New Year မပန်.... အောင်မြင်မှုတွေဆိုလို့ ကိုယ်ကိုကိုယ် အတော့်ကို ပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ရတယ် ရုန်းကန်နေဆဲပါ
သတိတရရှိတာ ၀မ်းသာပါတယ် မခင်ဦးမေ.. မခင်ဦးမေကတော့ စည်ကားလွန်းလို့ ခါချနေရတာ ဆိုတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဧည့်ခံနေရတာနဲ့ အတော် အချိန်ပေးရမယ်နော်
Thanksalot Ma Khin Zin Minn...
Andy Myint - 1/1/10, 11:15 AM
Happy New Year.. ကိုစော.. တခြား Comment တွေ ပြန်နေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ကိုစော Comment ကို မမြင်လိုက်ဘူး။ Celeberate မလုပ်လိုက်ရတာတော့ နာတယ်ဗျာ
Ko Paw - 1/1/10, 11:41 AM
ကိုအင်ဒီကြီး ပျောက်နေတာ... လက်စသတ်တော့ ဒိန်ချဉ်ဖောက်နေတာကိုး။
ကိုအင်ဒီတို့ တမိသားစုလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော နှစ်ဖြစ်ပါစေဗျိုး။
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် - 1/1/10, 12:34 PM
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနှင့် ကံကောင်းခြင်းများ ဆက်တိုက်ကြုံတွေ့ရပါစေ..
Thant - 1/1/10, 2:05 PM
Wishing you and your familyaprosperous new year 2010 ... & thanks for this post.
ရွှေရတုမှတ်တမ်း - 1/1/10, 2:30 PM
သက်ဝေ - 1/1/10, 5:18 PM
တွေးစရာလေးမို့ တွေးပြီး သဘောကျသွားပါတယ်...
ပျော်စရာမိသားစုလေးအတွက် ပျော်စရာ နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ...
Nu Thwe - 1/2/10, 11:29 AM
နှစ်ခါပြန်ဖတ်သွားပါတယ်။ ဦးနှောက်က သိပ်မကောင်းတော့လို့လေ ဟဲဟဲ။
ဒိန်ချဉ်လက်ကျန်က တဇွန်းမကဘူး။ အများကြီးပဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်စားလာတာမို့ နောက်ထပ် အိုးပေါင်းများစွာ ပွါးချင်ရင် ပွါးနိုင်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒိန်ချဉ်ကို သိပ်ချဉ်တယ် ထင်လာလို့ လွှင့်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ။ သူများကို ပေးမိရင်လည်း အန္တရာယ် ဖြစ်မှာစိုးလို့ နည်းနည်းချင်း မြေမြှုပ်ပစ်ရရင် ကောင်းလေမလား။ ကိုယ် စဉ်းစားမိတာ ပြောတာပါ။ ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူးး)
ကို Andy တို့ မိသားစုအတွက် မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ။
Andy Myint - 1/2/10, 11:44 AM
၀မ်းရေးအတွက် ဒိန်ချဉ်ရောင်းနေရတာပါ ကိုပေါ
ကိုရင်နော် ခင်လေးငယ်တို့လည်း မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ
Happy New Year Thant
အဟုတ်ပါပဲ ရွှေရတုမှတ်တမ်း... ၂၀၁၀ အတွက် လက်ကျန်ဒိန်ချဉ်လေးတွေ တည်နေတာလေ
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ မသက်ဝေ
အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်အောင် တခြားဟာလေး လုပ်ပေါ့ မနုသွဲ့.. ဒိန်ချဉ်တ၀က် ဒိန်ခဲတ၀က်လည်း ဖြစ်တာပဲ... ဒီမှာတော့ အမျှင်မပြတ်သေးလို့ နောက်တစ်အိုး ထပ်ဖောက်လိုက်ဦးမယ်
P.Ti - 1/2/10, 2:57 PM
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာပါ။ သူများနဲ့ မတူ အတွေးပါနဲ့ ပို့စ်နဲ့ နှစ်သစ်ဆုတောင်ကို သဘောကျမိပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
Space - 1/2/10, 3:19 PM
မီယာ - 1/2/10, 10:42 PM
အသစ်တွေ့လို့ နှစ်သစ် လက်ဆောင် ရသလိုပါပဲ ၀မ်းသာ အားရ လာဖတ်တာ... ကို Andy တို့ မိသားစု နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေ...
Nge Naing - 1/3/10, 3:25 AM
Happy New Year ပါ ကို အန်ဒီနဲ့ မိသားစု။
သူများဖေါ်စပ်ထားတဲ့ အစားကောင်း အသောက်ကောင်းကို ရှိတဲ့ နည်းအတိုင်း မလုပ်ဘဲ ဒိန်ချဉ်အမည်ကိုတော့ ခံထားတယ် ဒါပေမဲ့ ဒိန်ချဉ်လုပ်ဖို့ ပေးထားတဲ့ နည်းအတိုင်း မလုပ်ဘဲ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ပြုပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒိန်ချဉ် ဖြစ်လာဖို့ မရှိပဲ နို့ တအိုးလုံး ဆုံးတာပဲ အဖတ်တင်မှာ သေချာနေတယ်။
နှစ်သစ်မှာ ကိုအန်ဒီတို့ မိသားစု အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ။
Andy Myint - 1/3/10, 8:12 PM
တစ်ယောက်တစ်မျိူးစီပေါ့ ကိုပီတိ.. တစ်အိုးတစ်သည်စီ အရသာ ရှိပါပေတယ်
Happy New Year, Space
စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ မငယ်နိုင်... ၂၀၁၀ မှာ အမှန်အကန် ဒိန်ချဉ်အိုး ရမယ် မရဘူးဆိုတာ...
Phyo Wai Kyaw - 1/6/10, 12:19 PM
လာလည်သွားတယ်ဗျာ... ပိုစ့် အသစ်ကလေးတွေ လဲ အားပါးတရ ဖတ်သွား မှတ်သွားပါတယ်ဗျာ... AKM တို့မိသားစု နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ... :)